Feysal Cali Waraabe: Turkigu wuu afduubay wadahadlkii Somalia iyo Somaliland – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Gudoomiyaha Xisbiga ka jira Somaliland ee UCID, Feysal Cali Waraabe ayaa sheegay in dalka Turkiga oo horay u dhexdhexaadiyey dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamulka Somaliland uu adfuubay wadahalkaas.
Feysal Cali Waraabe oo khudbad ka jeediyey munaasabad lagu qabtay Hargeysa ayaa ku taliyey in maamulka Somaliland uusan bisha Febaraayo ee socota uusan tegin dalka Turkiga, halkaasoo Dowladda Soomaaliya iyo maamulka Somaliland ku balansan yihiin.
“Turkigu wuu afduubay wadahadalkii, mar dambana Turki wadahadal looma aadayo, horta Turki xagee inooga yimid?, Midowga Afrika maaha, Jaamacadda Carabta maaha, Midowga Yurub maaha, marka xaguu ka socdaa?” ayuu yiri Feysal Cali Waraaabe.
Feysal ayaa tilmaamay inuu Turkiga uga careysan yahay inuu hantin farabadan geliyey Koonfurta Soomaaliya, gaar ahaan Muqdisho, magaalada Hargeysana geeyey afar gaari oo ah nuuca gaadiidka gurmadka degdega ah.
“Turkigu $360 Milyan dollar ayuu geliyey Muqdisho, 1,500 ardayna waxbarasho lacag la’aan ayuu siiyey, annaga wuxuu inoo keenay 4 amblance, ma intaas ayuu nagu dhexdhexaadinayaa?” ayuu sidoo kale yiri Feysal Cali Waraabe.
Feysal Cali Waraae ayaa sidoo kale ku jeesjeesay maamulkada Puntland, Kaahtumo iyo Koonfur Galbeed, isagoo ku tilmaamay wax muuqaal ahaan oo kaliya u shidan.